Masibuyele kwi talent - ii-Geofumadas
NgoNovemba, 2010 cadastre, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Masibuyele kwi talente, sibulale i-genie kwaye sivuselele umntu oye wagxotha isibane, kuba kungcono ukukholelwa kulowo owayeneqhinga elincinane kuneziphumo zintathu ezinokungahlawulanga nto.
Le yimixholo yenkomfa endiye ndaya kuyo kwimihla yakutshanje. Le ndlela yayijoliswe kumbono wezobuchwepheshe, kodwa isitshixo sawo sasishiya kunye nexesha elinafuneka ukuba ndikhanyise imihla yam yokuphumla ibaluleke kakhulu. Ukudibana nomSilamsi kwiMosque eLondon kunye namava kunye nembali ye Parachicos U-Chiapa de Corzo undiphe ixesha lokuba acinge kakhulu ngento.
Sele sele ifilosofiyelwe ngokwaneleyo kwimbali yesakhono kunye ne talente, kuba kulungile ukuba awuzange ufunde ukuhlaziya ngokukhawuleza inqaku le ncwadi Umntu Ophakathi. Oku, ukuchonga umahluko owenza izinto ezintsha ngenxa yobume babo kwaye ngubani emva kokubona oko kukho ukuvuselela iindlela ezintsha zokubenza bazinzileyo.
Kwiveki eledlule sithathe amanyathelo abalulekileyo malunga nokufezekiswa komzekelo wokuzinzisa oomasipala kunye no-cadastre odibeneyo. Hamba okuyimfuneko, kwindawo apho izinto sele zikhona -kakhulu- zinikezelwa, kodwa apho izigidi zityalomali zonke ezine, ezithandathu okanye iminyaka elishumi kwisangqa esichukumisayo sokucinga ukuba i-cadastre imele ibuye ibuye kwakhona. Ukusetyenziswa kweminyaka emine edluleyo kuye kwandibamba ngenkqubo enomdla wokubuyisela kwakhona izinto ezikhoyo kunye nokuzama ngeetalente ezintsha zamakhwenkwe (kunye namantombazana) anqwenela ukwenza umsebenzi kule ndawo. Into endiyifunayo kulo nyaka ndabhala kakuhle iinyanga ezilishumi elinanye, kwaye uhlobo lomntu lubangele ukuba kwindlela ethile, ukuba sicinge ngokulindelekileyo, ukuba sinika ithuba lokugqibela kwaye sibandakanye abanye ukuba siyiqwalasele ngomxholo.
Kodwa imihla yonke ndiqinisekile ukuba i-skast yethu rhoqo kwi-cadastre iqulethwe kwiindawo zecawa ezihlala zifuna ukwenza okufanayo okanye ukuzama ukuzenza izinto ezahlukeneyo. I talente ephakathi kwabantu, kubandakanywa nokuzinza, asijongani nokuzisa izinto ezisetyenzisiweyo ukuba zisebenze kwaye zenzeke ukuba zingacingi ngentsasa yazo. Ekugqibeleni, ndinethemba lokudibanisa abaqeqeshi bezitrato ezindala, kunye nokunyaniseka kwabo kunye nokunyaniseka kuya kuba nefuthe kubantu abancinci abafuna ukufunda kwizipho zabo njengengqeqesho, ukuqonda kunye namava. Kananjalo ukwaneliseka kokubona amandla abantu abatsha abafundisa asebekhulile -Casi- ubugcisa bemephu yedijithali, i-intanethi kunye nokukholelwa ukuba imikhuba yabacebisi inokufumaneka ngexesha elifutshane.
Kwihlabathi lezobuchwepheshe, apho ubuchule bubonakala khona rhoqo kwisibini, ndicinga -kunye nabo bonke Siqinisekile, ukuba kuyimfuneko ukuyeka ukukhangela ukuba ngaba ingqiqo iyabulala italente. Ndiyayithanda into endiyibonayo abahlobo bam bevutha kwi-Ipad endiyibuza yona inyanga ezine ezedlulileyo, izandla zam zikhangela ukubeka ikhowudi kuloo nto. I ithemba ukuba ngakumbi kulo Umthombo eliphakathi Open, ogama impembelelo baya kukubona kule minyaka 15 elilandelayo kwaye ziya ukutshintsha indlela esizijonga ishishini IT andikwazi. Kodwa akhathazwe ukuba, abazi ukuba ixesha oqhamayo buchopho kwi mveliso, ikhompyutha, amajelo geospatial, unxibelelwano, sibona namandla kuchaphazela imibuzo efana nale:
-Ukuba siyazi ukuba i-fossil fuel igqiba iplanethi yethu, kutheni iimbongo zamagunya azigxila ekutshintsheni ukusetyenziswa kwayo? Kutheni iUnited States ingalindele ukuba ithathe inxaxheba ngokuzibandakanya kwinkqubo yaseKyoto?
-Ukuba siyazi ukuba iplanethi inemihla yayo, kubani iziganeko ezinkulu zesivumelwano somhlaba esiye senza ukuba asikwazi ukwenza? Kutheni umntu engakwazi ukuvusa imfazwe aze asityhale sonke ngenxa yokuba engakwazi ukuwugqiba?
- Kutheni iimfuno zezoqoqosho ziye zamisa ingqiqo yeembono eziza kunika eli hlabathi iminyaka engama-200?
-Kubani na umntu angenza nantoni na idiot owenza oko akufunayo kwilizwe elityelweyo likaThixo? Sithatha njani khona apho sikholwa ukuba yi-idyll eya kuphelisa urhwaphilizo?
I-Talent, eneengcambu ze-etymological ezivela kuloo mali kumxholo wamaYuda kwaye yayingenakufezeka kumzekeliso kaMateyu 25, akufuneki ukuba ivuselelwe ihlabathi kwi-Ubuntu format. Kunoko ekuhlaziyweni kwezinto ezikhoyo; yethu thina ngokuqinisekileyo khangela ukuba indlela engcono kunyuswe oko sele yaye ujonge ukuba siya kwamkela izinto ezininzi eziluncedo negalelo.
Njengomzekelo omfutshane; Ndihlala kwilizwe -ezibukeka zininzi- apho zithintelo zintlanu zikhona icawa yevangeli, apho i-25% yabemi bayo ithi ukholo lobuProthestani olongezelela iCawa yamaKatolika kunye nezinye iinkolo zamaKristu ezinqulo zidlula i-90%. Oko kuthetha ukuba phantse i-100% iyavuma ukukholelwa kwimigaqo echanekileyo kwaye apho kukholelwa ukuba akukho nto uThixo ayikwazi ukuyenza kwiimilinganiselo zethu zokuziphatha.
Kodwa kweli lizwe elifanayo, impembelelo yalo kuluntu ayikho, kungekhona ukutsho okubi. Oku kungenxa ngelixa amanani zeecawa zonqulo bathi baye lokukhula eliphezulu kwiminyaka yakutshanje, eli lizwe uqhubeka kuwa kumanqanaba yokugqibela nobuhlwempu, urhwaphilizo, ukuthutyeleziswa kweziyobisi, ukungakhuseleki kunye nezinye epithets baswele. Ndiyazi, leyo sivume efanayo unqulo ukuphila ukuba esekelwe loo migaqo. Kodwa sonke siyaqonda ukuba kuyimfuneko ukubuyela kwisakhono somntu, ukubona ukuba kunengqiqo ukuqhubeka nokwenza ikhekhe ngendlela efanayo kunye neengcamango ezinjalo. Ukuba abantu ababini izigidi ezibetha ebandleni ngeCawa kusasa baya kujoyina imizamo yabo yokubukeza ngokucacileyo impembelelo abayenayo, ngokuqinisekileyo baya kufikelela kwizigqibo eziqinile; ayinakuguqula imigaqo yayo kodwa ukuvuselela izicwangciso.
Kunobungozi ukugweba uMtyholi kwaye kungaboni, njengokungathobeli into enkulu kunathi ekhoyo apho -kwaye apha ngaphakathi- Ngokuqinisekileyo kunesidingo sokumba (apha) kwaye khangela ukuba senza it talente kwisakhono esipheleleyo (ngaphandle). Kufuneka kubekho indlela yokurhoxisa lo mpolitiki onobuhlanga othembisa ukuba sonke sinokubamba imali yethu.
Kubalulekile ukubuyela kumntu njengomntu onjalo, ukulibala amaninzi amaninzi esiye sinikela kulokho esikwenzayo nokusekela ukuzinza kwethu kubantu abangafezekanga. Masibuyele kwi talente, sibulale i-genie kwaye sivuselele umntu oye wagxotha isibane, kuba kungcono ukukholelwa kulowo owayeneqhinga elincinane kuneziphumo zintathu ezinokungahlawulanga nto.
Nangona oko kwenzeka, ndifuna ukuthatha okungaziwa ukuba ndibulele ochwepheshe be-3 ngaphandle kobuchule kunye nokukwazi ukuba kwakungenako ukuvuselela ubuchule be-9 kunye namantombazana e-5 abaza kubonga. Ngalo mbewu encinci, kwiminyaka eyi-10, ezine zazo (okanye nabo) ziya kunikezelwa ekunyamekeleni iintsana zabo, abanye baya kuvuna impumelelo esingafuniyo. Ngamnye ukuya kwi-PM ye-7 yoLwesihlanu ikhofi kunye nama-donuts Uya kuhleka ngezohlwayo musa F! kunye nokuvalwa kwayo kwidolophu kuze kube phakathi kobusuku, i-arrechuras W! xa ungekho ukuyeka ibhola, zesongelo zesipho M! kwaye ngubani owaziyo, mhlawumbi kule mbongo nguDon G!
Post edlulileyo«Edlulileyo Iingxaki ngomhleli wombhalo: I-Microstation V8 kwi-Vista kunye ne-Windows 7
Post Next 9 Magazines kule geomatics eliphakathiOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "Masibuyele kwi talente"
Ngaba ukuthetha msy ukwenza le post inde YT ezintanjeni, kodwa ishiye iimbono ezingaphezulu kwezi zithuba kuba isixa semali sinikela Per iphezulu kunokuba sifumana umzekelo esifuna yezoqoqosho moya ingcaciso n ukuba nangona kungekho namnye ucele kakhulu ngoko ezinemvume nangenangqiniseko ukuba ngamnye ubuhlwempu kulinganiswa lulinganiselwa ngokulinganayo kuzo zonke iingingqi Ndiyakucela njengoko l regi n Arequipa ukwenza imilinganiselo yakho irregularadades anikwe kanye makeup zemali kubonakala inika run urhulumente INEI Central. Kwaye siyazi into akalinganiswa ayikwazi ukoyisa amanani elungileyo kwaye ucocekile kufuneka bazi ukuba pol imisebenzi tica kwaye iyintoni engasebenziyo.
Ndingathanda ukuba nomfundisi onjengawe.